Su,aalo La weydiiya Dadka Ku Sooma Wadamada Galbeedka#Su,aalaha ugu Muhiimsan | Xaqiiqonews
Su,aalo La weydiiya Dadka Ku Sooma Wadamada Galbeedka#Su,aalaha ugu Muhiimsan
Isla marka ay bilaabataba Bisha Ramadaan,Muslimiinta dunidana ay bilaabaan soonkooda, ayaa dadka Ku sugan Wadamada galbeedka waxa ay la kulmaan su,aalahan.
Sida Xaqiiqonews ay ka soo tarjuntay Wargeyska ‘The Independent’ dadweynaha reer Britian waxa ay caadi ahaan weydiyaan dadka sooman su,aalo dhowr ah, iyagoo rabo in ay soonka wax ka ogaadaan.
Ramadaanka Mar walbo Taariikh Kala Duwan Miyuu Yimaadaa?
Jawaabta ugu haboon ayaa waxa ay tahay : Maalmaha sanadka ee Taariikhda Hijriga waxa ay ka yaryihiin 11 maalin Sanadka Miilaadiga, sidaa darteed waxaa wax caadi ah in sanad walbo 11 maalin uu hoos uga soo dago taariikhdii la soomay sanad hore.
See Ku ogaataan in Qoraxda Dhacday?
wadada ugu fog ee lagu ogaado in qoraxda dhacday marka aad joogto wadamada galbeedka, waa in aad ku xisaabtanto masaajidka ku dhaw, ama in aad ka baarto Google-ka.
Soonku ma leeyahay halis caafimaad?
Soonku uma maleynaayo in caafimaad darro u keenaayo Shakhsiga , Hase yeeshee soonku waajib kuma ahan dadka
qabaa cudurada, ama dumarka xaamilada, kuwa ilmaha nuujiyana iyo dadka waaweyn.
Bataatan wax ma cuneysid miyaa?
Marka qofka sooman la weydiiyo su,aashan waxaa inuu ku jawaabaa qofka sooman waxaa ka reeban cuntada maalintii oo dhan qorax soo bax ilaa qorax dhac.
haddaba waa lagama maarmaan in aad wax badan cuntaan?
taasi waxa ay u gaar tahay doorashada qofka ,hase yeeshee kuwa cuna cuntooyinka ugu badan waa kuwa dareema baahiya darran maalinkii, waxeyna dareemaan oon badan, taasina waa sababta muslimiinta suxuurta u cunaan cunto yar.
su,aalaha kale ee in la weydiiyo qofka ay badan tahay waxaa ka mid ah “Biya xitaa ma cabeysid miyaa?”, “Oon ma dareemisid?” , “Candhuuftaadama liqi kartaa?” “Ma ii ogashahay in aan hortaada waxa ku cuno? ,”Ma laguu ogalyahay in aad Cajiinka ilkaha isticmaasho?”
Jawaabaha Qaarkood waa kuwa la isku khilaafsanyahay, waxaa laga yaabaa in dadka qaaar candhuuf liqidda aysan dhib u aheyn, kuwa kalana waxaa laga yaabaa in cadayga oo kaliya ay ogolyihiin.